Fe (bir) + S ( baaruud) = Fes () | Isla'egta Falcelinta Kiimikada ee dheellitiran
Fe S = FES | Isu dheellitirka Kiimikada
Falcelinta isku dhafka Fal-galka yareynta-hawada
Fe + S → Kharashka
(rnn) (rnn) (rnn)
(sax ah) (waa) (ka)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Fe + S → Fes
Waa maxay xaaladda falcelinta Fe (birta) ay kaga falceliso S (sulfur)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa FeS ()?
Fe ayaa la falgala S
Dhacdada ka dib Fe (birta) waxay la falgashaa S (sulfur)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Kharashka, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda S (baaruud), la waayay
Bir aan-biraha ahayn ayaa kula falgala biraha si loo abuuro milix
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Fe + S → Fes
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Fe (birta)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe (birta)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fee (birta) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta S (sulfur)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee S (sulfur)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh S (sulfur) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta FeS ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee FeS (sulfur)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeS () badeecad ahaan?
Falcelinta Fe (sắt) la falgal S (sulfua) soo saaro Kharashka (sắt (II) sulfua) , xaalada heerkulka ma aha độ
Falcelinta soo saarta walaxda Fe (sắt) (bir)
4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2 FeCl2 → Cl2 + Fe 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2 Fe
Falcelinta soo saarta walaxda S (sulfua) (baaruud)
Cl2 + H2S → 2HCl + S 2H2 + SO2 H 2H2O + S Ag2S → 2Ag + S
Falcelinta soo saarta walaxda FeS (sắt (II) sulfua) ()
Fe + S → Fes Fe (MAYA3)2 + Na2S → Fes + 2NaNO3 Fe2(NA4)3 + 3Na2S → 2FeS + 3Na2SO4 + 2S